के एक भन्दा बढी मास्क लगाउँदा कोरोनाबाट जोगिन्छ ? | स्वास्थ्य | GNN Nepal GNN Nepal के एक भन्दा बढी मास्क लगाउँदा कोरोनाबाट जोगिन्छ ? | स्वास्थ्य | GNN Nepal
मास्कको प्रयोग नगर्नुभन्दा खतरनाक एउटै मास्कलाई बारम्बार लाउनु
माघ ४ गते, २०७७ १८:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । मास्कले कोरोना भाइरस विरुद्ध उत्कृष्ट संरक्षकको रूपमा कार्य गर्दछ। मास्कको उचित प्रयोगले सङ्क्रमित व्यक्तिबाट कीटाणुको प्रसार स्वस्थ मानिसमा जान बाट जोगाउँछ। यद्यपि उसको प्रभावकारितामा विचित्र प्रवृत्ति रहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वमा इन्ट्रि भएपछि मास्क अनिवार्य औषधि नै बनेको छ ।
यसैबिच मास्कको लेयर पातलो हुने भएका कारण पछिल्लो समय दुई मास्क वा तीन मास्क थोपरेर लगाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ।
के एउटा मास्क भन्दा दुई वटा मास्क लगाउनु राम्रो हो ?
सुरक्षाको दोस्रो चरण अपनाउनका लागी, धेरै व्यक्तिहरू अनुहारमा मास्कबाहेक फेसशिल्ड पनि रोजिरहेका छन् । भने कोरोनाका उछाल आएका अमेरिका जस्ता देशमा डबल मास्कको चलन द्रुत वृद्धि भएको छ। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनदेखी , खेलाडी अनि विशेषज्ञ समेतले दुई ओटा मास्क लगाउने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू प्राय मास्क बिना देखिन्छन् । तर केहि बुद्धिजीवी र सहरमा बस्ने व्यक्तिहरू भने डबल या ट्रिपल मास्कमा पनि फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् ।
के वास्तवमा एउटा भन्दा बढी मास्क लगाउन जरुरी छ ?
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुनका अनुसार चिकित्सा दृष्टिकोणबाट एउटा मास्कको ज्यादा प्रयोगले जीवाणु र भाइरसलाई भित्र पस्नका कठिन बाधाको रूपमा काम गर्दछ।
‘यदि तपाईँ सङ्क्रमण फैलाउन लाग्नु भएको छ भने मास्कले भाइरसको प्रसार रोक्न पर्याप्त सुरक्षा दिने काम गर्दछ डा.पुनले भने, ‘हालको स्वास्थ्य दिशानिर्देशनहरूले पनि व्यक्तिले कम्तीमा २ देखी ३ तह भएको मास्क लगाउनु पर्दछ जुन अनुहार राम्रोसँग फिट होस्।’
एक भन्दा बढी मास्क लगाउनुको पछाडि के विचार छ ?
हामीले अधिकांश मास्कमा प्रभावको समान दर हुन्छ भन्ने याद राख्नुपर्दछ । सर्किजल मास्क सामान्य प्रयोगको लागि राम्रो हुन्छ जबकि अधिक सुरक्षा दिनेवाला एन ९५ मास्क फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ।
यस तरीकाले, दुवै सर्किजल मास्क र एन-९५अनुहार मास्कहरू आफैँमा प्रभावकारी छन् । तर दुबैलाई समावेश गर्नाले थप सुरक्षा मिल्छ भन्ने सोचाइले काम गर्छ नै भन्ने जरुरत छैन । डाक्टर पुन पनि ज्यादा मास्क लगाउनाले सास फेर्ने गाह्रो हुन सक्ने तथा अनुहारमा घाउ समेत हुन सक्ने बताउँछन् ।
पुन भन्छन् , ‘यदि तपाई राम्रो गुणस्तरयुक्त मास्क सुरक्षित र ठिकसँग फिट हुने गरी लगाउनुहुन्छ भने थप मास्कको उपयोग गर्न आवश्यक पर्दैन।
दुई वा तिन भन्दा बढी मास्क उच्च जोखिमयुक्त ठाउँमा कार्यरत व्यक्ति वा स्वास्थ्यकर्मीले लगाउन जरुरी छ । तर आम सर्वसाधारणले भने धेरै ओटा मास्क लगाउनुभन्दा धेरै तहयुक्त मास्क लगाउनु पर्ने विशेषज्ञहरूको पनि सुझाव छ ।
एउटै मास्कलाई धेरै दिनसम्म नधोई लगाउनु या लगातार एउटै मास्कलाई प्रयोग गर्नु मास्क नलगाउनु भन्दा पनि बढी खतरनाक हुने एक अध्ययनले जनाएको छ ।
अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालय र क्यालिफोर्निया ब्याप्टिष्ट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले मास्कको प्रभावकारिताको अध्ययनमा सर्किजल मास्कको जाँच गर्‍यो ।
उक्त जाँचका क्रममा जब मास्क नयाँ हुन्छन् तब तीनले छोटा आकारका तिन चौथाइ कणलाई रोके । तर पुरानो हुँदै गएपछि सोही मास्कले जम्मा एक चौथाइ कणलाई मात्रै रोक्न सक्यो ।
अन्वेषकले पनि जति अधिक समय मास्क लगाइन्छ उत्ति नै झन् खतरनाक हुने समेत बताएका छन् । यसैले पनि विश्वव्यापी आम जनतालाई अधिकतम तीन-लेयर सर्किजल मास्क लगाउन सल्लाह दिइन्छ।
किन लगाउने मास्क ?
१) कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा साना साना भाइरस हाम्रो वरिपरि रहेको हुन्छ । जसबाट मास्कले हामीलाई बचाउन सक्छ ।
२) मास्कको प्रयोगले कोरोना भाइरसका कीटाणुलाई हावामा फैलिन दिँदैन ।
३) यसले भाइरस सङ्क्रमणलाई धेरै हदसम्म रोक्छ, त्यसैले मास्कहरूको प्रयोग धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
४) जबसम्म कोरोना भाइरसको सफल उपचार आउँदैन वा भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा विकास हुँदैन, तब सम्म भाइरस रोकथामका लागी उत्तम उपचार भनेको मास्क हो ।
५) ५० प्रतिशत यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो कुनै लक्षण नभएको बाबजुद पनि सङ्क्रमण फैलाउन सक्छन्। त्यसैले मास्क लगाउन महत्त्वपूर्ण छ ।
६) सर्किजल मास्कले ८० प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्दछ भने कपडाको मास्कले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
७) मास्कको प्रयोगपछि त्यसलाई उचित स्थानमा राख्नुहोस् ।
८) यदि तपाईँले कपडाको मास्क लगाउनहुन्छ भने, ख्याल गर्नुहोस् कि त्यहाँ तीन तहहरू हुन्। यसले राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट सफल उपचार भएपछिको खुसी
भदौ २९ गते, २०७७
कोरोना बिमा गराउने मध्ये १२ हजार १ सय ९३ कोरोना संक्रमितले एक अर्ब १९ करोड ७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाए
राजविराजमा स्वास्थ्यकर्मीसहित १३ जनामा कोरोना पुष्टि
प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै